COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေက မျိုးစိတ်သစ်တွေကိုရော ကာကွယ်ပေးမှာလား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 28/12/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ တောင်အာဖရိကတိုင်းပြည်တွေမှာ COVID-19 ရဲ့ ဆင့်ကဲမျိုးဗီဇပုံစံနဲ့ မျိုးစိတ်သစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမျိုးဗီဇကွဲပြားတဲ့ ရောဂါပိုးသစ်ဟာ ဗြိတိန်မှာဆိုရင် နေ့စဉ် လူ နှစ်သောင်းဝန်းကျင် ရောဂါပိုးကူးစက်နှုန်း တိုးသွးစေတဲ့အထိ အခြေအနေပြင်းထန်သွားစေခဲ့တာပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပထမဆုံးစတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်ဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ်ကနေ အခြေအနေအဆိုးရွားဆုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တိုင်းပြည်အဖြစ်ကို တမဟုတ်ချင်း ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။
ဗြိတိန်ရဲ့ ပြဿနာဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူသားတွေရဲ့ သောကကို မီးစာမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်တွေ စတင်နေချိန်မှ ခုလို ဖြစ်ပျက်သွားတာဖြစ်တာမို့ ကာကွယ်ဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာလား? ကာကွယ်ဆေးတွေက ဒီမျိုးစိတ်တွေကို တွန်းလှန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
B.1.1.7 လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုး မျိုးစိတ်သစ်ကို ယခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ရောဂါပိုးဟာ ကူးစက်မြန်လွန်းပြီး ရုတ်ချည်းဆိုသလို ဗြိတိန်မှာ နေ့စဉ်လူနာတိုးနှုန်း ၆၀% ကျော်တိုးသွားပါတယ်။
ဒီမျိုးစိတ်ဟာ COVID-19 ရဲ့ မျိုးကွဲ ၁၇ မျိုးထဲက တစ်ခုဖြစ်လာသလို ပြင်းထန်မျိုးစိတ် ၈ မျိုးထဲမှာလည်း ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ WHO ကတော့ မျိုးစိတ်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကုသဆေးထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမျိုးစိတ်သစ်ဟာ တချို့လူတွေ ထင်မှတ်မှားနေသလို ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားမျိုးစိတ်သစ်တွေလိုပဲ ဘာကြောင့် မျိုးဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုတာကိုလည်း တိတိကျကျ ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။
ခုချိန်မှာ လူတွေစိတ်ပူနေတဲ့အချက်ကတော့ ဗြိတိန်က ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားလာခွင့်တွေ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထားတာမို့ ဒီရောဂါပိုးဟာ နိုင်ငံတကာဆီကို ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေမှာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေဟာ B.1.1.7. ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးပေမယ့် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ ဒီမျိုးစိတ်သစ်ကို ကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
Pfizer- BioNTech ကာကွယ်ဆေးကို ဖန်တီးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ BioNTech ကတော့ မျိုးစိတ်သစ်ဟာ ယခင်မျိုးစိတ်ဟောင်းနဲ့ ၉၉% တူညီတာကြောင့် လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေ အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ Moderna ကလည်း သူတို့ရဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို လှုံဆော်ပေးတာသာဖြစ်တာမို့ ရောဂါပိုးရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် စိတ်ပူနေဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗြိတိန်က မျိုးစိတ်သစ်ကိုရော တောင်အာဖရိက က မျိုးစိတ်သစ်ကိုပါ ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ Moderna ဘက်က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း WHO ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ဖွယ် မဟုတ်ရင်တောင်မှ သတိထားဖို့ လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲလို့ သတိပေးစကားဆိုခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေး လုံလောက်စွာမဖြန့်ချိနိုင်သေးခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ပိုမိုလာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ခံထားရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိတို့တိုင်းပြည်ကို မျိုးစိတ်သစ်ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ မရောက်လာသေးသည်ဖြစ်စေ နေအိမ်ထဲမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာနေထိုင်ပြီး Mask တပ်တာ၊ လက်ဆေးတာတွေကိုလည်း ပုံမှန်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပြီး ကာကွယ်ဆေးမရခင်အချိန်အထိ နေထိုင်သွားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။